किंग्स्टन स्टेनली | कसरी खडा हुनुहोस् र तपाइँको CV लाई थाहा छ?
एन्टिनी राज जयमानी लिङ्कडेन बाट हाम्रो अनुयायी
18 सक्छ, 2019
किंग्स्टन स्टेनली दुबई सिटी कम्पनीसँग
किंग्स्टन स्ट्यानले - कसरी खडा हुन र तपाईंको CV थाहा पाउनुभयो?
किंग्स्टन स्टेनली - ती सबै उम्मेद्वारहरूका लागि जो उत्तर प्राप्त गर्न संघर्ष गर्दैछन्, वा एक रोजगार अनुप्रयोगहरूबाट साक्षात्कारयहाँ मद्दत गर्न केहि चरणहरू छन्।
एक लाइन प्रबन्धक सम्झनुहोस्, भर्ती प्रबन्धक वा भर्ती परामर्शदाता नियमित आधारमा सयौं सीभीको साथ अक्सर डुबुल्छ। अफसोस, उम्मेदवारहरूको संख्या भर्तीको लागि "स्क्याटरगन ग्रोन" राख्नुहोस् र उनीहरूको सीभी सबै भूमिकामा पठाउँनेछ, यदि उनीहरूले बिल फिट गर्दैनन् भने पनि। म तपाईंलाई निम्न कार्य गर्न सल्लाह दिनेछु:
केवल तपाइँको CV लाई भुक्तान गर्नुहोस् जुन तपाइँ पूर्ण रूपमा मिल्नुहुन्छ, भाषाहरूको हिसाबले, क्षेत्र अनुभव र अनुभव बर्ष।
सम्पूर्ण विज्ञापन सजिलै पढ्नुहोस् र तपाइँ सबै बाकसहरू टिक्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
भर्ती एजेन्सीहरू लगभग सधैं विशिष्ट उद्योग अनुभवको आवश्यकता हुन्छ, किनकि तिनीहरूका ग्राहकले सटीक खेलको लागि शुल्क तिर्नेछ।
तपाईं उद्योग परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, तुलनात्मक उद्योगमा गर्नुहोस्, वा कम्पनीहरूको साथ प्रत्यक्ष जानुहोस् (एजेन्सीको माध्यमबाट)।
एकचोटी तपाईले आफ्नो CV एक नियोक्तालाई पठाउनुभयो, हाईडि manager प्रबन्धक को हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईं आफ्नो प्रोफाइलसँग द्रुत 5- मिनेट कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँको CV कहाँ पठाइएको छ भनेर ट्र्याक राख्नुहोस्, संगठित राख्नुहोस् र मार्केटको साथ नक्शा गर्नुहोस् सम्भावित रोजगारदाताहरूको सूची।
दुबै लिन्क्स, MEPRA, सिटीस्केप, Gitex, अरब ट्राभल बजार जस्ता नेटवर्क कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुहोस् र निर्णय लिनेहरूलाई सिधा भेट्नुहोस्। अनुहार अनुहार सधैं उत्तम हुन्छ।
अन्तमा, का सबैभन्दा ठूलो भाग साक्षात्कार प्रक्रिया साक्षात्कार प्राप्त गर्नु हो। जब यो बुक गरिएको हुन्छ जब निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं समय तयारी गर्दै बित्नुहुन्छ र केवल तपाईंको अनुसन्धान नगर्न नबिर्सनुहोस्।
किंग्स्टन स्टेनली भ्रमण गर्नुहोस्
तपाइँ एक साक्षात्कार सुरक्षित भएपछि सुझावहरू पनि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ
कम्पनीमा तपाइँको अनुसन्धान गर्न सम्झनुहोस्। 'हाम्रो बारेमा' खण्ड पढ्नुहोस् वेबसाइटको र यो जानकारी प्रयोग जब तपाईं सिधा कुरा किन तपाईं तिनीहरूको लागि काम गर्न चाहानुहुन्छ। केवल यो नभन कि तपाई बहुराष्ट्रीय, ठूलो कम्पनी वा सानो स्टार्टअपको लागि काम गर्न चाहानुहुन्छ। तपाइँका जवाफहरू ग्राहकलाई विशेष बनाउनुहोस्। विकिपीडियामा कम्पनी प्रोफाइलमा हेर्नुहोस्, यसले तपाईलाई उनीहरूको बारेमा जान्नु पर्ने धेरै कुरा बताउँछ।
अन्तर्वार्ताको लागि समय मा हुनुहोस्। समयमा भनेको पाँच देखि दस मिनेट चाँडो हुन्छ। यदि आवश्यक परेमा, अन्तर्वार्ताको स्थानमा ड्राइभ गर्न केहि समय लिनुहोस् समय भन्दा पहिले तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा हुन्छ, र कति लामो हुन्छ यो त्यहाँ पुग्न हुनेछ.
साक्षात्कारको लागि ड्रेस सफलता
तपाईलाई निश्चित गर्नुहोस् साक्षात्कार सफलता को लागि उचित पोशाक सम्भावित रोजगारदातालाई बनाउने पहिलो प्रभावले ठूलो भिन्नता बनाउन सक्छ। एक साक्षात्कारकर्ताले बनाउँछ पहिलो निर्णय तपाइँ कस्तो देखिनुहुन्छ, र तपाइँले लगाइराखेकोमा आधारित भइरहेको छ। यसैले यो जागिरको अन्तर्वार्ताको लागि उचित लुगा लगाउन सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तयार गर्न प्रश्नहरू:
1. तपाईलाई कम्पनीको बारेमा के थाहा छ? - तिनीहरू कहिले स्थापना गरियो, वैश्विक कार्यालय स्थानहरू, स्टाफ हेडकाउन्ट आदि।
2. यस भूमिकाका बारे तपाईलाई के चासो छ? - यदि सम्भव छ भने निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई कामको विवरणबाट कर्तव्यहरू थाहा छ
3। मलाई आफैं बारेमा बताउनुहोस् - यो प्रश्नको अर्थ "मलाई कसको विस्तृत विवरण दिनुहोस्, तपाई हो भने, पेशेवर बोल्दै, हामी स्पिटिक्समा डुब्न अघि।"
4. हामीले तपाईंलाई किन काममा लिनु पर्छ? - तपाईको प्रासंगिक अनुभव / सम्भाव्यताको बारेमा सोच्नुहोस्
5। तपाईंको मुख्य बल र कमजोरी के हो? प्रत्येकको लागि एक उदाहरण छ।
6। तिम्रो भविष्यका लक्ष्यहरू के हो? - यथार्थवादी हुनुहोस् / क्यारियर दिमाग
7. तपाईं आफ्नो वर्तमान जागिर किन छोड्दै हुनुहुन्छ?
8। तपाइँ कसरी दबाबको सामना गर्नुहुन्छ? - तपाईं कसरी आफ्नो काम को प्राथमिकता को बारे मा कुरा गर्नुहोस।
9। तपाईंको वेतन अपेक्षाहरू के हो?
10। तपाईका लागि कस्ता प्रश्नहरू छन्?
केवल मुख्य क्षमताको एक सूची नबनाउनुहोस्। 1 वा2कुञ्जी शक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् - जुन स्थितिसँग प्रासंगिक छ - र उनीहरूको साथ ब्याक अप गर्नुहोस् उदाहरणहरू। तल तपाईंका लागि केही विचारहरू छन्;
1। मसँग उत्कृष्ट लेख्ने सीप छ। म नियमित रूपमा ग्राहकहरु को लागी प्रेस विज्ञप्तिहरु राख्छु वा मेरो निर्देशकहरूको लागि मार्केटिंग योजनाहरू, धेरै छोटो सूचनामा।
2। म एक उत्कृष्ट कम्युनिकेटर हुँ र धेरैमा काम गरेको पछिल्लो अनुभवको साथ अस्खलित अरबी र अंग्रेजी बोल्न सक्छु विविध र सफल टीमहरू.
तपाईंको कमजोरीलाई छलफल गर्दा चालको प्रश्न हो। एक साक्षात्कार हुनुपर्छ ALWAYS धेरै थोरै नकारात्मकसँग सकारात्मक हुनुहोस्। याद गर्नुहोस् तपाईको कमजोरीलाई एक शक्तिमा बदल्न को लागी याद गर्नुहोस्।
1। मसँग 'हो' धेरै भन्न सक्ने प्रवृत्ति छ ममा काम गर्न र सामान्यतया म व्यस्त रहन्छ कार्यालयमा काम समाप्त नभएसम्म, यो मेरो उत्तरदायित्व हो भने पनि।
महत्वपूर्ण: कमजोरीको अन्त्य सकारात्मक दृष्टिकोणमा समाप्त हुन्छ.
प्रश्नहरू तपाईले तिनीहरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ
अन्तर्वार्ताको अन्तमा केहि प्रश्नहरू सोध्नुहोस् अन्तर्वार्ताकारको साथ सम्बन्ध बनाउँन, जस्तै;
1। कम्पनीको बारेमा तपाईलाई मनपर्छ?
2. व्यवस्थापन शैली के हो, वा कार्यालयको संस्कृति?
3। टीममा कतिजना मानिसहरु?
प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुहोस्
के त्यहाँ केहि छ जुन तपाईले चाहानुहुन्छ म फेरि जानुहोस्? अब अर्को चरण के हो?
किंग्स्टन स्टेनली को बारे मा
किंग्स्टन स्टेनली एक अग्रणी विशेषज्ञ डिजिटल हो, मध्य पूर्व र बेलायत मा अवस्थित मार्केटिंग र टेक भर्ती एजेन्सी, मार्केटिंग को पूरा स्पेक्ट्रम भर मा ग्राहकहरु र उम्मेद्वारहरु संग विशेष काम गर्दै, 2011 चाँडै डिजिटल र टेक्नोलोजी क्षेत्रहरू.
हामी तपाईंलाई खोज्न, स्क्रिनमा मद्दत गर्दछौं र तपाईंको लागि उपयुक्त उम्मेद्वार चयन गर्नुहोस् एकीकृत मार्केटिंग र प्रविधि रोजगार, र हामीसँग उपयुक्त उम्मेदवारहरूको सब भन्दा ठूलो, सबैभन्दा हालको र योग्य नेटवर्क छ। तपाइँसँग एक भूमिका छ जुन तत्काल भर्न आवश्यक छ वा किलर पोर्टफोलियो, तपाईले यहाँ खोज्नु भएको कुरा पाउनुहुनेछ। कडा नैतिकता, ईमानदारी, ईमानदारी र उद्देश्यको साथ काम गर्नु हाम्रो व्यवसायको चार खम्बा हो र यसले हाम्रो ब्रान्ड, हाम्रो स्टाफ र हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरू।
दुबई शहर कम्पनी दुबईमा रोजगारीका लागि राम्रो गाईडहरू प्रदान गर्दै। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो दुबईको मार्गदर्शकहरूमा रोजगार। त्यसोभए यो कुरामा तपाईले संयुक्त अरब अमीरातमा आफ्नै भाषाको साथमा गाइडहरू, सुझावहरू र रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ।